Nyocha: Martin Vrijland
Gịnị ma ọ bụrụ na ntinoteknology na ọgụgụ isi na-eduga anwụghị anwụ?
gbara akwụkwọ Nyocha	by Martin Vrijland	na 13 July 2017	• 8 Comments
Gịnị ma ọ bụrụ na ntinoteknology na ọgụgụ isi na-eduga anwụghị anwụ? Gịnị ma ọ bụrụ na transhumanists ka Ray Kurzweil Google na Michio Kaku (mara site Discovery Channel) enweta hà na anyị nwere ike dochie niile ndu efu na mkpụrụ ndụ anyị ahu site nanotechnology aruputaghari mkpụrụ ndụ nke mkpụrụ ndụ ihe nketa flaws na-akpata ọrịa na enwe, na ịhụnanya-kenyere ? Ntak emi [...]
Omume a na-egbu mmiri: iwu kachasị mma nke ọkpọ ọkpọ Ronald Plasterk!
gbara akwụkwọ Nyocha	by Martin Vrijland	na 12 July 2017	• 16 Comments
Ị maara onye ụkọchukwu ahụ nwere ọmịiko, bụ onye gbanwere na mberede site n'aka onye nkụzi na ọkà okwu na Buitenhof dịka Minista nke Education, Culture and Science n'okpuru ụlọ ọrụ Balkenende IV. Ronald Plasterk nke na-egbukepụ egbukepụ ma na-enwe obi ụtọ bụ ma eleghị anya ọ bụ ihe a na-achọpụta site na ntụgharị ọsọ ya na ihu imi. Mgbe ụfọdụ, ọ na-eyi ọkpụkpọ mara mma na [...]
'Horizon Zero Dawn' si Amsterdam Ịgba chaa chaa ụlọ ọrụ Guerrilla Games 1e nzọụkwụ kwupụta abawanye eziokwu
gbara akwụkwọ Nyocha	by Martin Vrijland	na 11 July 2017	• 7 Comments
Usoro ihe omume telivishọn VPRO Tegenlicht zigara usoro ihe omume na 16 pril 2017 na isiokwu 'All in the game'. Aha a họọrọ nke ọma, n'ihi na akwụkwọ akụkọ ahụ bụ ezigbo ihe atụ nke otu ụwa na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ọtụtụ nde mmadụ n'ihu ọha na-efu onwe ha n'ịgwuri egwu. Egwuregwu ndị a na-aghọwanye ihe ezi uche dị na ha ma gbanwee nke ọma site na 'linear', [...]
Turkey na Iran, mmegide amụma megide Israel na ụzọ map kwupụta ọchịchị Luciferian ụwa
gbara akwụkwọ Nyocha	by Martin Vrijland	na 27 June 2017	• 32 Comments
Tupu mgbe ahụ, ekwuru m na amụma amụma dịka ụdị edemede na eziokwu nke anyị bi na ya. M kwukwara na Turkey na-emezu ọrụ nke Magog na President Erdogan bụ Gog nke Magog dịka a kpọtụrụ ya na akwụkwọ Bible nke Ezikiel (lee ebe a). Tupu ị daa ma chee: "Oh no [...]
gbara akwụkwọ Nyocha	by Martin Vrijland	na 3 June 2017	• 3 Comments
Nicholas Copernicus dere dị ka akụkọ ihe mere eme anyị na 1543 mgbe Kraịst gasịrị na Sun bụ etiti nke mbara igwe anyị nakwa na ụwa bụ nanị mbara ala nke gbara gburugburu anyanwụ. Ihe a na-awụ akpata oyi n'ahụ n'oge ọ na-egbu oge idebe ọrụ ya dị ukwuu na mbara igwe ya [...]
Age nke Aquarius, New Age na New World Order
gbara akwụkwọ Nyocha	by Martin Vrijland	na 29 December 2016	• 19 Comments
Helen Helena Petrovna Blavatsky bụ n'ezie onye nchoputa nke Ọgbọ Ọhụrụ nke okpukpe niile ga-ejikọta na nhazi 1 ọchịchị ụwa bụ usoro dị mma. Ọ gara n'akụkụ ụwa dum iji mụọ okpukpe niile. Nke a n'onwe ya ga-abụ ihe ịrịba ama na nwaanyị a si na-eme nke ọma, n'ihi na [...]
Gịnị mere ị ga - eji chegbuo onwe gị banyere mmejọ niile dị n'ụwa?
gbara akwụkwọ Nyocha	by Martin Vrijland	na 11 September 2016	• 2 Comments
Gịnị mere ị ga - eji chegbuo onwe gị banyere mmejọ niile dị n'ụwa? Nke a bụ ajụjụ ọtụtụ ndị jụrụ. A na-agbakwụnye nke ahụ na nke a na-ewetara gị ike. Ụfọdụ ndị kwenyere na ị mepụtara onwe gị eziokwu, ya mere ọ bụrụ na ị na-elekwasị anya na ikpe na-ezighị ezi, ị [...]
Isi okpukpe nke okpukpe: Ònye bu ezi Chineke na onye bu Setan?
gbara akwụkwọ Nyocha	by Martin Vrijland	na 14 December 2015	• 12 Comments
N'ọtụtụ mmeghachi omume sitere na ndị na-agụ akwụkwọ, a jụrụ m ihe mere m ji ekwu ọtụtụ ihe banyere satan? Ọ bụrụ na e nwere Setan, ọ ghaghị ịbụ Chineke? Maka ndị na-agụ akwụkwọ ndị dị na ebe nrụọrụ weebụ a, ha ga-abụ ajụjụ na-enweghị isi. Na ahụmahụ ha enwere ike ọ dịghị chi ọ bụla ma ihe niile bụ [...]
Ime Anwansi Na - eme ka Google tinye aka na - ejikọta ihe efu na eziokwu
gbara akwụkwọ Nyocha	by Martin Vrijland	na 26 October 2015	• 2 Comments
N'izu gara aga, m tụlere ohere nke ibi na ụwa nke mepere emepe, ebe m kwuru okwu banyere nchọpụta sayensị, dị ka nkọwa nke eluigwe na ụwa na eriri eriri (ozizi tiori) nke na-akpa àgwà dị ka koodu kọmputa (lee ebe a). Enwekwara m mkparịta ụka nke a na-eme ka a na-emegharị ahụ n'ime mgbagharị. Nke a kacha mma nghọta site na [...]
Otutu akụkụ, ntughari software, ihe omuma ma obu nkpuru obi. Gịnị bụ eziokwu?
gbara akwụkwọ Nyocha	by Martin Vrijland	na 20 October 2015	• 27 Comments
N'okwu banyere asụsụ Hibru, akọwapụtara m otú eluigwe na ụwa si arụ ọrụ ngwanrọ. Abụghị m onye mbụ na ọ bụ naanị otu onye na-akpọ nke ahụ, ọbụnadị onye na-agụ kpakpando na onye nrite Nobel bụ onye na-agbata n'ọsọ Nobel George Smoot na-eche banyere ajụjụ ahụ. Ọ bụ ezie na ọ na-ekwu na nke a TED ngosi na ọ bụ 'ntakịrị [...]
Nleta nile: 1.402.772
Coronavirus covid-19 na sayensị: Kedu ka ọ si abanye n'ahụ gị ma olee otu ị si ebufe ya?
Coronavirus: ebee ka nje oria si bia, oleekwa otu ha si amụba ma na-agagharị?
Thezọ kachasị dị irè iji lụ ọgụ coronavirus sitere na China (vidiyo)
Corona Crisis: mgbe ọ bụ banyere ihe anyị kwesịrị ime ugbu a?
'Ndapu nke cabal' ihe nzuzu na ndi bu 'Q Anon' Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers)?
SalmonInClick op Coronavirus covid-19 na sayensị: Kedu ka ọ si abanye n'ahụ gị ma olee otu ị si ebufe ya?
Future op Coronavirus covid-19 na sayensị: Kedu ka ọ si abanye n'ahụ gị ma olee otu ị si ebufe ya?
SandinG op Coronavirus covid-19 na sayensị: Kedu ka ọ si abanye n'ahụ gị ma olee otu ị si ebufe ya?
Onye nwe ya op Coronavirus covid-19 na sayensị: Kedu ka ọ si abanye n'ahụ gị ma olee otu ị si ebufe ya?
Popup a ga-emechi na:
Iwu akwukwo akwukwo oria zuru oke ugbu a: